Ogaden News Agency (ONA) – Hogaanka Arimaha Abaabulka iyo Bulshada (HAAB) oo Simi naar siiyay xubnaha Joka
Hogaanka Arimaha Abaabulka iyo Bulshada (HAAB) oo Simi naar siiyay xubnaha Joka
Hogaanka Arimaha bulshada & Abaabulka Jabhadda wadaniga xoreynta Ogadeniya ONLF, Halgame Sheikh Maxamed Cabdi Yaasiin ‘’Diirane’’ayaa Siminaar siiyay Xubnaha Jaaliyada Ogadeniya ee faraca magaalada Pretoria ee Caasimada wadanka South Africa.
Siminaarkan oo lagu qabtay xafiiska Faraca jaaliyada Ogadenia ee koonfur Africa magaalada Pretoria gaar ahaan xaafada Pretoria West ayaa socday muddo labbo maalmooda ah, waxaana ka faaiidaystay xubno farabadan oo isaga kala yimid nawaaxiga magaalooyinka Johannesburg , Pretoria iyo magaalooyin kale.
Siminaarkan oo ku saabsanaa maamulka iyo hogaaminta, tayaynta & kor u qaadida aqoonta xubnaha ayay xubno farabadani ka soo qayb galeen islamarkaana ka fa a iidaystay Cashiradii loo fidiyay. Waxaa lagu tala jiraa inay waxbadanna kabadali doonaan wacyiga xubnaha ka qaybqaatay siminaarka, waxayna ku barteen arima la xidhiidha maamulka iyo waxa ay tahay hogaamintu.
Madaxa Arimaha bulshada & Abaabulka jabhadda ONLF mudane Shiekh Maxamed Cabdi Yaasin ayaa waayadan ku sugan wadanka South Afroca isaga oo u jooga hawlo isugu jirra kormeer iyo Abaabul ayaa si joogto ah ula kulmaayay bulshada ku dhaqan wadanka South Africa islamarkaana la yeelanaaya shirar waa weyn & kulamo gooni gooni ah, ku waas oo dhamaan tood ku saabsan Kor u sii qaadida hawlaha Halganka & midaynta shacabka Soomaalida Ogadeniya.
Waxaa ka socda meela kala duwan oo caalamka ka mid ah barnaamijyo kor loogu qaadayo wacyiga siyaasiga ah iyo arima la xidhiidha hogaaminta. Waxaana lagu raja weynyahay inuu halganka shacabka S.Ogadenya u gudbi doono marxald cusub oo soo afjari doonta brobagaandada cadawga iyo beenta aan jirin ee laga gado.